Waxaad u la khaati aad version Android hadda oo aad rabto inaad ku raaxaysato qaar ka mid ah qaababka cusub in kuwa kalena ay leeyihiin, ama loo casriyeeyo si ay u version cusub Android oo aad OEM weli ma bixiyaan, ka dibna waxa la joogaa wakhtigii si ay u iftiimiyo ah Android version cusub (ama ROM) waayo-aragnimo fiican.
Waa maxay ROM ah?
Dhab ahaantii ROM ay tahay oo keliya mid ah sida nidaamka Windows ka hawlgala kaas oo ay leeyihiin nooc oo kala duwan, iyadoo aan loo eegayn waa ROMS stock ka Google ama manufactures, ama ROMS caado ka dhinac saddexaad. Sidaas biligleynaya ROM cusub uyeelaysaan kuwo u heelan nidaam cusub hawlgalka si aad telefoon.
Sida laga soo xigtay ra'yiururinta on Google Plus ah, oo kaliya 43% dadka isticmaala aaladaha ay rujin, waxaan kartaa faa'iido u badan oo ay soo afjarno qalabka iyo biligleynaya ROM caado waa sababta ugu muhiimsan ee wax badan oo dadka isticmaala, laakiin sidoo kale waxaan la kulmi doonaa wax badan oo ka mid ah khatarta rooting sida uu madhan yahay damaanadda, halka haddii aad ugu dambeyntii go'aan oo ay diyaar u iftiimiyo ROM cusub in qalab Android aad, fadlan raac talaabada ay Casharrada talaabo sida hoos.
TALAABADA KOOWAD: Unlock Bootloader iyo Flash Recovery Custom ah
Maxaa yeelay habka furo waa kala duwan ee telefoonka kasta, ma mari karno iyada oo tallaabo faahfaahinta talaabo, fadlan ka raadi sida loo furo telefoonka gaarka ah ee Google. Markaas download soo kabashada ( TWRP ama ClockworkMod ) si ay u iftiimiyo. Fiiro gaar ah: bootloader furo iyo iftiimiyo kabashada caado macnaheedu ma aha ma soo afjarno qalab aad, waxaa dhab ah talaabada ugu horeysa ka hor soo afjarno. Laakiin waxaan si adag ugu talinaynaa in aad ka rujin qalabka si gurmad xogta.
Talaabada labaad: kaabta Data Dhammaan
Waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay in la sameeyo ka dib markii bexeen soo kabashada waa in wax walba oo gurmad aad heshay in qalab aad. Waa in aan sameeyo gurmad Nandroid ah taas oo ah image dhameystiran ee nidaamka hadda jira. Haddii ay wax qaldamaan, aan in meesha ugu horeysa halka aan bilaabay rooting soo celin karaa qalabka our. Waxaan badbaadin karaan wax badan oo dhibaatooyin haddii ay wax ku qaldanaayeen taas oo run ahaantii aad inta badan u dhacdaa. Waa kuwan tallaabooyinku fudud in la sameeyo gurmad Nandroid ah.
Reboot qalab aad iyo soo galaan hab dib u soo kabashada, qalab kala duwan ayaa siyaabo kala duwan, laakiin waxa ay mar walba ku lug leedahay 2 badhamada: Power iyo button Volume, fadlan ka raadi habka saxda ah ee qalabka gaarka ah.
Madaxa in 'ee kaabta' ama qaybta 'Nandroid' ee hab dib u soo kabashada, xaqiijin gurmad la goobaha default noqon lahayd OK.
Sug ilaa dhowr daqiiqo ha dhammayn.
Haddii aadan rabin inaad si loo soo dajiyo oo dhan ee Chine ay mid mid iyo lumin app goobaha ka dib markii biligleynaya ROM cusub, awoodo aad oo dhan barnaamijyadooda gurmad iyo sidoo kale goobaha marka hore adiga oo isticmaalaya kaabta ka app Titantium taas oo u baahan afjarno. Taasi waa sababta aan si adag ugu talinaynaa in aad ka rujin qalab aad marka hore.
Tallaabada saddex: Shidista ROM aad rabto
Marka hore waxaad u baahan tahay inaad kala soo baxdo ROM aad u baahan tahay oo waa file zip ah, halkan waa 6 ROMS caadadii ugu caansan aad ka fiirsan kartaa. Ka dib markii ay soo bixi ROM ah, waxa nuqul ka kaarka SD iyo bilaabaan in ay u iftiimiyo.
Roboot qalab aad iyo soo galaan hab dib u soo kabashada sida aan hore u yeeli jiray.
Madaxa in 'Ku rakib Zip ka SD Card' ah qayb ka mid ah dib u soo kabashada.
Dul ROM ka soo dejisan oo ay doortaan.
Sug in muddo ah si aynu dhammayn.
Fadlan tirtiro xogta iyo khasnado sida u qabo qaybta dib u soo kabashada, waxa iska ilaalin kartaa dhibaatooyinka qaar uu keeno xogta hore. Markaas waxaad reboot karaa oo wuxuu ku raaxaysan ROM cusub.
Xusuusta in la soo celiyo oo dhan barnaamijyadooda iyo goobaha in qalab aad haddii aad sameeyey gurmad Titanium. Ka dib markii in, waxa la joogaa wakhtigii si ay u raaxaystaan ​​ROM kabo cusub.
7 Waxyaabaha la Sameeyo hor soo afjarno Android Devices